यी हुन् अनौठा कर ! – Janaubhar
यी हुन् अनौठा कर !
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १०, २०७४ | 191 Views ||
तपाइँले ट्याक्स अर्थात् करका बारेमा त सुन्नु–जान्नु भएकै होला । धेरथोर कर तिर्नुहुन्छ पनि होला । तर सायद आज जुन प्रकारका करको बारेमा यहाँ जानकारी दिइँदैछ, त्यसबारेमा तपाइँलाई थाहा नहुन पनि सक्दछ ।
अविवाहित कर : इंगल्याण्डमा सन् १६९५ मा जुलियस सिजर तथा १७०२ मा पिटर द ग्रेटले अविवाहित कर लगाएका थिए । अमेरिकाको मिसौरीमा पनि उक्त कानून लगाइएको थियो । कानून अनुसार २१ देखि ५० वर्षसम्मका अविवाहित पुरुषहरुले ब्याचलर ट्याक्स तिर्नुपर्दथ्यो ।
मूत्रकर : रोमका राजा वेस्पेशनले सार्वजनिक शौचालयमा कर प्रणाली सुरुवात गर्ने घोषणा गरे । सार्वजनिक शौचालयबाट मलमुत्र खरीद गर्ने कम्प्नीहरुले कर तिर्नुपर्दथ्यो । उक्त मलमूत्र उद्योगहरुमा निकै काम लाग्दथ्यो ।
स्तन कर : यो सुन्दैमा अनौठो तथा अपत्यारिलो लाग्दछ । तर विश्व इतिहासमा महिलाहरुमाथि स्तन कर पनि लगाइन्थ्यो । महिलाको छाति नापेर स्तनको आकार अनुसार कर असूल गरिन्थ्यो । यसबाट दिक्क भएर एकजना महिलाले आफ्नो वक्षस्थल नै काटेर कर कर्मचारीको हातमा राखिदिएको इतिहास छ ।
टाटू कर : अमेरिकाको अर्केन्ससमा सरीरमा टाटू बनाउँदा पनि कर तिर्नुपर्दछ । टाटूसँगै अन्य बडी पियर्सिङ तथा इलेक्ट्रोलाइसिस ट्रिटमेन्टमा पनि ६ प्रतिशत कर लाग्दछ ।
Prevमरेको १० दिनपछि महिलाले जन्माइन् बच्चा !
Nextतपाईंको फोन ह्याक भयो कि ? यस्तो संकेत आए सचेत हुनुहोस्